Ducada eyga jiran. ? Rumaysad ugu ducee oo caawi saaxiibkaa inuu bogsado.
U duceeya eeyaha buka. Eeyahaasi waa saaxiibada ugu wanaagsan ee ninka, shaki la'aan. Waxay qoysaska u keenaan farxad iyo reyn reyn. Laakiin nasiibdarro, waxkasta maahan ubaxa. Sida noolaha oo kale, iyaguna way bukoodaan, waxay u baahan yihiin daryeel iyo walwal.
U soo duceeya eeyga buka ayaa dejin doona adiga iyo qoyskaaga xilligan rajo beel. Eygaagu sidoo kale waa abuur Ilaahay, sidaa darteed wuu ku barakeeyaa isaga haddii aad ka codsatid iimaan iyo aaminaad.
Waa kuwaan salaaddaha qaarkood si looga caawiyo saaxiibkaaga yar inuusan xannuun dareemin oo dhakhso u bogsiiyo.
1 U duceeya eeyaha buka
2 U ducee si aad u bogsiiso xayawaan jiran
3 Salaadda Ilaalinta Xayawaanka
4 U ducee si aad u bogsiiso xayawaan
5 U soo duceeya eeyga buka ee bogsanaya
6 Salaadda Saint Francis ee Assisi xayawaan jiran.
U duceeya eeyaha buka
“Aabaha jannada, fadlan nagu caawi waqtigayada baahan. Waxaad naga dhigtay maamuleyaal (magaca xayawaannada). Haddii ay tahay rabitaankaaga, fadlan soo celi caafimaadkaaga iyo xooggaaga.
Sidoo kale waxaan u duceeya xoolaha kale ee baahan. Waxaa loola dhaqmayaa si xushmad iyo xushmad leh dhamaan abuurkooda uu u qalmo.
Sayidow, Ilaahow, waad barakaysan tahay, Oo magacaaguna waa qoduus weligiis iyo weligiis. Aamiin
Sayidow gacaliyeyow, xayawaankeyga qaaliga ah iyo lammaanaheyga (magac) ayaa xanuunsaday. Waxaan kuu duceysanayaa adiga, adiga oo kaa baryaya caawimaada aad noo fidiso xilligan baahida loo qabo.
Waxaan si is-hoosaysiin leh uga codsanayaa inay u fiicnaato oo hage u noqoto xayawaankayga xayawaanka ah sidii ay ula midoobeen carruurtiisii ​​oo dhan.
Ducadaadu ha ku bogsato saaxiibkay gacaliyahay ha ku siiyo maalmo badan oo cajiib ah oo aan wada qaadan karno.
Aan ku ducaysanno oo aan bogsano annagoo qayb ka ah abuuritaanka jacaylkaaga. Aamiin!
U ducee si aad u bogsiiso xayawaan jiran
«Ilaaha Qaadirka ah, oo i siiyey hibada aan ku garto dhammaan uunka koonkan oo ka tarjumaya iftiinka jacaylkaaga; oo aad ii wakiishay, addoon u khushuucsan wanaaggaaga aan dhammaadka lahayn, ilaalinta iyo ilaalinta noolaha meeraha; ii oggolow, iyada oo gacmahayga aan dhammaystirnayn iyo aragtidayda dadnimo ee xaddidan, inaan noqdo aalad naxariistaada rabbaaniga ah ku dhacay bahalkan.
Taasi aniga oo adeegsanaya dareeradayda muhiimka ah waxaan kugu duubi karaa jawi tamarta siinaya, si dhibaatadaadu u kala go'do oo caafimaadkaaga loo soo celiyo.
Waxaan rabikaraa in lagu sameeyo dardaarankaaga, iyada oo la ilaaliyo xumaha wanaagsan ee igu xeeran. Aamiin!
Salaadda Ilaalinta Xayawaanka
Waxaa mahad leh Aabbaha naxariista leh, Ee uumay waxa nool oo dhan oo deggan meeshuu deggan yahay, si ay ula noolaadaan kuwa kula nool, iyo malaa'igtayda Masruufka ah, kaasoo ilaaliya xayawaanka igu nool gurigan oo dhan.
Waxaan si qiiro leh kaaga codsanayaa inaad u fiirsato xayawaankan aan waxba galabsan, kana fogaato xumaanta oo dhan, una oggolaatid inay ku noolaadaan nabadgelyo iyo nabad si ay cimrigayga oo dhan farxad iyo jacayl kaaga buuxaan.
Riyadaadu ha noqoto mid nabdoon oo ruuxaagu ha igu hoggaamiyo dhinacyada quruxda iyo nabadda ee noloshan aan wadaagno.
U ducee si aad u bogsiiso xayawaan
«Ariel Archangel, oo Ilaah siiyey hibada daryeelka xoolaha oo dhan,
Milatariga Raphael, oo helay hadiyadda rabbaaniga ah ee bogsashada, waxaan kaa codsanayaa inaad iftimiso xilligan nolosha noloshan macaan leh (dheh magaca xayawaanka).
Naxariista Eebbe ha ku soo celiyo caafimaadkiisa, si uu mar kale ii siiyo farxadda jiritaankiisa iyo u hibeynta jacaylkiisa.
U oggolow aniga, gacmahayga iyo aragtidayda bini aadamka xaddidan, in aan u noqdo aalad jacaylka Eebbe oo kugu duubmo jawi quwad leh, si ay dhibaatadaadu u sii darto oo caafimaadkaagu u soo noolaado.
Tan waxaa lagu samayn karaa dardaarankaaga, iyada oo ilaalinaysa niyad-jabka wanaagsan ee igu xeeran. Aamiin.
U soo duceeya eeyga buka ee bogsanaya
Aabbaha jannada ku jira, xidhiidhkayaga bani -aadamnimo ee aannu la leenahay saaxiibbadayada noocyada kale ah waa hadiyad cajiib ah oo gaar ah oo adiga lagaa siiyay. Hadda waxaan kaa codsanayaa inaad xoolaheenna siiso daryeelka waalidka ee gaarka ah iyo awoodda bogsashada si aad uga takhalusto dhibaato kasta oo ay yeelan karaan. Naga sii, saaxiibbadaada aadanaha, faham cusub oo ah mas'uuliyadaha aan u hayno makhluuqyadan.
Way na aaminaan sidii aan adiga kuu aaminnay; Nafteenna iyo naftooduba waxay ku wada jiraan adduunkan si ay u yeeshaan saaxiibtinnimo, is-jacayl iyo is-jacayl Qaado tukashadeena daacadda ah oo buuxi bukaankaaga ama xayawaannada silica ku haya iftiin iyo xoog si aad uga adkaato wixii bogsiinaya daciifnimada jirka. Sayidow, waxaan si gaar ah kuugu sheegayaa baahiyahaaga (dheh magaca xayawaanka rabaayadda ah).
Wanaaggiisa ayaa lala xiriiriyaa dhammaan noolaha oo nimcadiisa waxay u dhexaysaa dhammaan abuurkiisa. Naftayada tamarta wanaagsan, oo midkeen kasta ku taabanaya muujinta jacaylkooda.
Sii jaalayaasheena xayawaanka ah cimri dheer oo caafimaad leh. Sii xiriir wanaagsan oo ay nagala shaqeeyaan, oo haddii Sayidku go’aansado inuu inaga qaado, waxay naga caawineysaa inaan fahamno inaysan mar dambe nala joogin, laakiin u soo dhowaada oo keliya Rabbiga. Baryootankayaga ducada wanaagsan ee Saint Francis ee Assisi, oo kugu sharfisay wax kasta oo uunka. Sii awood uu ku ilaaliyo saaxiibbada xoolaha ilaa ay weligood aamin ku ahaadaan Rabbiga weligood, halkaas oo aan rajeynayno maalin uun inaan iyaga la midoobo weligiis. Aamiin.
Salaadda Saint Francis ee Assisi xayawaan jiran.
Sharafta San Francisco, Quduuska ah ee fudud, jacaylka iyo farxadda.
Cirka gudahiisa waxaad ka fikirtaa kaamilnimada aan dhammaadka lahayn ee Ilaah.
Si naxariis leh noogu fiirso.
Naga caawi baahiyadeena ruuxiga iyo jirka.
U soo ducey Aabaha iyo Abuuraha inuu naga siiyo nimcooyinka aan kaa codsanno wax weydiistaada, adiga oo weligiis saaxiibkiis ahaa.
Oo nuur qalbiyadeenna jacaylka sii kordhaya ee Ilaah iyo walaalaheen, gaar ahaan kuwa aadka ugu baahan.
Gacaliyahayga San Chiquinho, gacmahaaga saar malaa'igtaan (dheh magaca xayawaanka) ee kuu baahan! Ogaanshaha jacaylkaaga, raac codsigeenna.
Saint Francis ee Assisi, noo soo ducee. Aamiin
Hadda oo aad ogtahay ducada eeyaha jiran, sidoo kale baro barashada ducada ah ee xayawaanka jiran.
Baro salaadaha xoogga leh si aad si fiican u seexato